Waxa Magaalada Johnsburg ee Caasimadda dalka Koonfur Afrika ka socdo Shir lagaga hadlayo Qadiyadda Ictiraaf-raadinta Somaliland.
Shirkan oo ay soo qaban-qaabiyeen Xisbiyada Qaranka Koonfur Afrika oo uu ka mid yahay Xisbiga ANC iyo Xafiiska Somaliland ee halkaa ayaa waxa goob-joog ka ah Wasiirka Maaliyadda Somaliland Dr. Sacad Cali Shire, kaasi oo Toddobaadkii hore u duulay halkaasi.
Shirka ayaa waxa lagu soo hadal-qaaday qaybtii ay Dawladdii sideetamaadkii ee Koonfur Afrika ku lahayd Dawladdii kacaanka ee Soomaaliya, xilligii ay duqaynaysey Magaalooyinka Somaliland 1988-kii.
Wasiirka Maaliyadda ee Somaliland Dr. Sacad Cali Shire oo shirkaa ka jeediyey khudbad ayaa sheegay inay Somaliland haysato dood adag, taasi oo ay ku kasban karto aqoonsi Caalamiya ah.
Dr. Sacad waxa kale oo uu sheegay in markii Somaliland ay Madax-banaanideeda la soo noqotay ay bilowday xidhiidh ay la samaynayso Dalalka Gobolka, Maantana ay Caasimadda Somaliland ee Hargeysa ay ku yaallaan Qunsuliyado ay leeyihiin Waddamada Itoobiya, Jabuuti, Turkiga, UK iyo Taiwan.
Dhinaca kale, waxa iyaguna halkaa ka hadlay Masuuliyiin ka mid ah kuwa Xisbiyada Koonfur Afrika ayaa sheegay in loo baahan yahay in si weyn loo deraaseeyo Arrinta Somaliland inta uu shirku socdo.
Intaasi ka dib, Wasiirka Maaliyadda oo Shirkaasi ka dib la hadlay Saxaafadda ayaa faahfaahiyey ujeeddada shirka uu ka qayb-galay “Waxa halkan lagu qabtay Shir lagu taageerayo Gooni isku taagga Somaliland iyo Qarannimada Somaliland, shirka waxa ka qayb-galay Xoogagga horumarka ee Koonfur Afrika oo uu ugu horreeyo xisbiga shuuciga ah iyo Xisbiga ANC, dhallinyaro badan baa Shirka ka soo qayb-gashay, shirkuna wuu soconayaa, go’aankiisana waxa la soo saari doonaa marka uu dhamaado.” Ayuu yidhi, waxaanu intaa ku daray “Waxaan halkan uga Mahad-celinayaa Ciddii shirkan soo qaban-qaabisay oo uu uga horreeyo Safiirka Somaliland ee Koonfur Afrika iyo Dadkii ka socday Xisbiyada Shuuciga iyo ANC ee Shirkan soo qabab-qaabisay..”
Safiirka Somaliland ee Koonfur Afrika Mr. Axmed Jaamac oo isaguna Warbaahinta la hadlay ayaa sheegay inay shirkan muddo ka soo shaqaynayeen sidii uu u qabsoomi lahaa.